Amagciwane Imyuziyemu ku Amsterdam: nezwe elimangalisayo kungabonwa zonke
Ekupheleni konyaka odlule e-Amsterdam wavula wokuqala Museum wake kwamagciwane. Umqondo kokuvula leso sikhungo kuyinto engavamile, ngoba bonke abanye ukubonisa izilwane zasendle Macro kuphela. Abadali isinqumo ukuze kuboniswe wonke umuntu, ukuthi eduze indoda, kunesinye zwe elibuswa kakhulu ngisho nokuwabona.
Umsunguli we Museum
Vula Museum eziphilayo Amsterdam isinqumo Haig kaBheliyali, ngubani umqondisi wale isikhungo ngalesi sikhathi. Yena ngokwakhe uyavuma ukuthi lowo mbono lafika kuye ngisho engu-12 edlule. Nokho, kwacaca ukuthi kuphela ukuqaphela ngo-2014.
Museum empeleni kuyinto zoo, phela ziphephile ukuba siphile ngayo.
I-restaurant ehlukile itholakala eduze Royal Artic Zoo eziyinkimbinkimbi iyingxenye yalo. On zokwakha nazo zonke amakamelo Museum kanye nokulungiselela yayo ziphephile wachitha emhlabeni kwezigidi ezingu-10-euro.
Lokho utshelwa ababi evulekile kwamagciwane Imyuziyemu ku Amsterdam, wathi umqondisi.
zoo amaningi ukubonisa ingxenye encane kwezilwane kule planethi yethu. Ngokuyinhloko lezi tilwane letinkhulu, izinyoni nezilwane ezihuquzelayo. Ngesikhathi esifanayo Umuntu oyedwa kuphela okumelwe emzimbeni nezilwanyana ezincane ngaphezu kwabo bonke abantu emhlabeni. Kodwa isithakazelo kuzo kwembule ososayensi kuphela. Ngokungangabazeki, lokhu kungenxa yokuthi ukubona okungenani omunye abameleli nezilwanyana ezincane ngeso lenyama akunakwenzeka. Kodwa lokhu akusho ukuthi ama-bacterium kufanele ahlale kuphela emkhakheni Ochwepheshe emincane. Uma ungenalo ukuvula leli zwe elihle ngoba uquqaba, inzalo kule isayensi ayisoze ivele. Yingakho bonke abantu kufanele bazi ukuthi e-Amsterdam, lapho kwavulwa Museum kwamagciwane.
Yini kuyabonakala kule okungavamile Museum ziphephile futhi kungani kudala isithakazelo kangaka?
Museum sifana laboratory, lapho sebuningini ngesibonakhulu futhi flasks. Kulapha ungabona 2/3 we biomass microorganism ezikhona Emhlabeni. Kodwa lokhu akuyona into nje ukuthi kuwufanele ukuvakashela Museum eziphilayo Amsterdam. Kube kukhona laboratory yangempela lapho ochwepheshe ngokuthini ziphephile entsha. Zizobona ezweni isayensi ukubona ososayensi zisebenza kanjani, kungenzeka efasiteleni ekhethekile thick, ingilazi inhlamvu.
Ngaphezu kwalokho, izikrini interactive efakwe kule Museum. Ngosizo lwabo, ubani Ungahlola amagciwane amaningi indlela ukuphila emzimbeni wakhe futhi yini bebizwa. Ngokwesibonelo, emlonyeni womuntu kungaba cishe 700 zinhlobo ezahlukene zama-bacterium, kanti amathe ezinyawo - mayelana 80 zezintaka isikhunta.
Futhi, ikamelo setha isibonisi omkhulu okuyinto abonise izivakashi izithombe okujabulisayo. Luqala ngokunikela isithombe Iso lomuntu, okuyinto uhlala ku amancane izibungu eyelashes. Ngemva kwalokho, izinguquko isithombe esikalini, futhi izivakashi ithuba ukubona ohlala emzimbeni umkhaza.
Omunye umbukiso - model of Ebola, okuyinto lithole notoriety ngonyaka odlule, kanye human immunodeficiency virus.
Luhambo okungajwayelekile futhi ezithakazelisayo iyona Kiss-o-imitha. Ngalo, abathandi Ungathola bangaki nezilwanyana ezincane umklomelo ngesikhathi kiss. Abasebenzi Museum inhlolo-vo ngaphambi kuvulwa Museum. Kwaba khona abangu-abantu abangu-42. Imibhangqwana wamanga amasekhondi 10. Ngemva kwalokho, ososayensi eqoqwe amasampula ngamathe ukuthola yayiyini microflora emlonyeni ngamunye kanye nenombolo ye-bacterium wathola indawo entsha yokuhlala.
amagciwane Imyuziyemu ku Amsterdam elinde izivakashi lawo nsuku zonke. Amathikithi ayatholakala ku-website Museum. Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu ithuba ukuthenga amaphasela "micro- + Artis Zoo." Ticket izintengo kuzohluka izingane kanye nabantu abadala. Ngokwesibonelo, ithikithi ingane izobiza wena € 12, abadala - 14. Zonke abafundi ungavakashela Museum for 7.5 euro. Izinsana kuze iminyaka emibili emnyango nakanjani free.
Belarusian abantu umdanso - umphefumulo wabantu bakhe
Ngemva ukushaya ikhanda lakhe ikhanda: yini okufanele uyenze? Izimpawu ukuxukuzeka
Evo Group - umculo ngekhulu xxi